Eny An-Dranomasina ho Fanohanana Ilay Gadra Politika Oscar López Rivera · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Julie Alexandra Aubert
Voadika ny 04 Jona 2014 8:33 GMT
Ny 29 mey lasa teo no nanamarika ny faha-33 taona nitazonana an'i Oscar am-ponja [en], sazy lava indrindra nihatra tamin'ny gadra politika portorikana. Tsy nisy porofo velively amin'izay heloka bevava nataony ; na izany aza dia nomelohina ho “manomana fanakorontanana” izy noho ny fifandraisany amin'ny Tafi-Panafaham-Pirenena (FALN), izay nanafatrafatra ny hampiasa hery handrodanana ny fanjanahan'i Etazonia an'i Porto Rico.
Nanambara i Oscar fa ny tena alahelovany indrindra dia ny mahita ranomasina. Noho izany toe-javatra izany no nanomanana ny hetsika eny ambony rano, ho vavlombelona amin'ny fanatanterahana izany faniriana izany. Ny hetsika dia nomanin'ny 32 x Oscar, vondrona mpikatroka iray mitolona amin-kafanampo ny mba hamotsoran'ny Filohan'i Etazonia, Barack Obama, ny helony. Ity lahatsarin'ny Noticel ity no ahitana ny sary sasantsasany nandritra io tontolo andro io.